Public Health in Myanmar: January 2012
ဆေးပညာဆည်းပူးလေ့လာရခြင်း၏ စိတ်ဖိစီးမှုများအား ယခင်ကပင် ကောင်းစွာမှတ်တမ်းပြုခဲ့ကြသည့် အထောက်အထား များစွာရှိပါသည်။ ဆေးပညာသင်သားတို့အနေဖြင့် ရရှိသည့်ပညာသင်ချိန်နှင့် မနိုင်ရင်ကန်ဖြစ်လောက်အောင် များပြားလှသည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာများကို မှတ်သားသင်ယူနေရခြင်း၊ အချိန်နာရီကြာမြင့်စွာ အလုပ်ခွင်တွင်ရှိနေရခြင်း၊ ရံဖန်ရံခါ ဆေးရုံဆောင်များအတွင်း လှည့်လည်စမ်းသပ်ကုသမှုအပေါ် (လူအချို့ က၊ ဥပမာ အစောင့်ဝန်ထမ်းက) အခွင့်ကောင်းယူ အလွဲသုံးစားမှုများပြုနေခြင်းကို မြင်တွေ့နေရခြင်း၊ နှင့် လူနာအချို့ တို့၏ အခံမရပ်နိုင်အောင်ခံစားနေရမှု နှင့် အသက်ဆုံးရှုံးရမှုအား သိမြင်ကြုံတွေ့နေရခြင်း ဟူသည့်အနိဋ္ဌာရုံများအား ရင်ဆိုင်နေကြရပါသည်။ (Bourgeois et al., 1993; Lubitz and Nguyen, 1996; Silver and Glicken, 1990)
ဆေးပညာသင်ယူမှုအား "လက်လွတ်စပယ် အလွဲသုံးစားပြုတတ်သော မိသားစုစနစ်" ဟု သမုတ်ခေါ်ဝေါ်ခံနေရခြင်းက ဆေးပညာရှင်တို့အပေါ် (ဝေဒနာခံစားနေရသူတို့၏) မယုံသင်္ကာဖြစ်မှုကိုတိုးပွားစေခြင်း၊ "သနားကြင်နာမှု စာနာမှုကင်းမဲ့ကြသူများ" အဖြစ်ကင်ပွန်းတပ်ခံရခြင်းတို့မှသည် ဆေးသမားတော်တို့အနေဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ မယုံတ၀က် ယုံတ၀က် ယုံရခက်ကြီးဖြစ်လာကြသည်(McKegney, 1989:452)။ ဆေးပညာလေ့လာသင်ယူရခြင်းမှရရှိခဲ့သည့် များစွာသော စိတ်ဖိစီးမှုများသည် ဆေးပညာရှင်တို့၏ ကာယသုခ၊ စိတ္တသုခ နှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များအပေါ် မလိုလားအပ်သည့် နာတာရှည်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေမှုနှင့် ဆက်နွယ်နေပေသည်။(Baldwin et al., 1997b; Shanafelt et al., 2002) ။ ထို့အပြင် ဆေးသမားတော်များစွာတို့၌ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသည့် အရာများအပေါ်လိုက်လျောညီထွေမှု မရှိသည့် တုန့်ပြန်မှုများ (အရက်သေစာသောက်စားခြင်းကဲ့သို့) ပေါ်ပေါက်လာလေ့ရှိခြင်းသာမက ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင်၏ကျန်းမာရေးအပေါ် သင့်တော်သည့်စောင့်ရှောက်မှုရယူရန် စီစဉ်မှုမရှိကြကြောင်း တွေ့ရသည်(Baldwin et al., 1997a; Martin, 1986) ။
ဆေးကျောင်းသို့ ၀င်ရောက်လာသော ကျောင်းသားများစွာတို့တွင် ပို၍ပို၍တိုးလာသော စိတ်ဖိစီးမှုများရှိလာကြကာ၊ ထိုစိတ်ဖိစီးမှုသည် ဆေးပညာသင်ယူနေသည့် (၄)နှစ်တာကာလလုံးလုံး (စာရေးသူတို့နိုင်ငံတွင် ဆေးကျောင်း ၄နှစ်တက်ရခြင်းဖြစ်မည်) အပြင် ဘွဲ့လွန်ပညာဆည်းပူးချိန်နှင့် သမားတော် အဖြစ်ဆေးကုသမှုပေးသည့် အချိန်တိုင်အောင် သူတို့ထံတွင်ရှိနေကြောင်း လေ့လာသုတေသနပြုမှုများစွာက မှတ်တမ်းပြုခဲ့ကြသည် (Clark and Zeldow, 1988; Rosal et al., 1997; Vitaliano et al., 1988) (Clark et al., 1984; Hendrie et al.,1990; Ramirez et al., 1995; Reuben, 1983; Shanafelt et al., 2002; Smith et al.,1986; Vitaliano et al., 1988, 1989)။ ထိုသို့မြင့်မားလာသော စိတ်ဖိစီးမှုများက ဆေးသမားတော်တို့အား စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေကာ လူနာများအား ကုသမှုပေးရာတွင် အကောင်းဆုံး ကုသမှုမပေးနိုင်ဖြစ်ရကြောင်း နှင့် သမားတော်တို့အနေဖြင့်လည်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျေနပ်နှစ်သက်မှုမရှိ ဖြစ်ရကြောင်း လေ့လာမှုများအရ သိရှိရသည် (Fields et al., 1995; Shanafelt et al., 2002)။ ထို့အပြင် ဆေးပညာသင်များစွာနှင့် ဆေးသမားတော်များစွာတို့သည် အလုပ်ခွင်မှစိတ်ဖိစီးမှုများအား အိမ်အထိ သယ်ဆောင်သွားကြကာ မိသားစုတွင်းဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုများဖြစ်စေခြင်း၊ မိသားစုအတွင်း နွေးထွေးကြင်နာမှု နည်းပါးလာကာ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေမှုများ များပြားလာခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ရသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာများဖြစ်သော ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ အားအင်ကင်းမဲ့ကာ နွမ်းနယ်ခြင်း၊ နှင့် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းဝေဒနာများ ခံစားကြရတော့သည်(Geurts et al., 1999) ။
ဆေးကျောင်းများအနေဖြင့် ဆေးကျောင်းသားများစွာတို့၏ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်သောကများ၊ ကသောင်းကနင်းဖြစ်မှုများအား ကာကွယ်နိုင်ရန်၊ မျှတစနစ်ကျသည့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်မှုများ ရယူနိုင်ရန် ဟူသည့် အရေးကိစ္စများ နှင့်စပ်လျဉ်းကာ ဆောင်ရွက်စရာ များစွာရှိပါသည်။ ဆေးကျောင်းသားများအား စိတ်ဖိစီးမှုစီမံခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိတိကျကျ ပုံဖေါ်လေ့လာသုတေသနပြုထားချက်အရ ၄င်းတို့အား စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ချသည့် နည်းပညာများသင်ပေးခြင်းက သူတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုနှင့် ပူပင်သောကများကို လျော့ချနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ထိုနည်းပညာများအား သူတို့ဆေးကျောင်းသားဘ၀ တလျောက်လုံးနှင့် သမားတော်ဘ၀တွင်ပါ အသုံးချနိုင်ပေမည်။ ဆေးကျောင်းသားများအား စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေမည့် အန္တရာယ်ရှိသည့်အချက်များနှင့် ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင်တွင် စိတ်ဖိစီးမှု စိတ်ဓာတ်ကျမှုဖြစ်လာမည့် သတိပြုဖွယ်ရာ လက္ခဏာများအား သင်ကြားပေးနိုင်သည် (Chang et al., 1997; Clark et al.,1984; Firth-Cozens, 2001; Linzer et al., 2001; McCranie and Brandsma, 1988;Shanafelt et al., 2003); ။ ထိုမှနေ၍ သမားတို့၏ ကျန်းမာသုခရစေမည့် နည်းနာများကို ဖေါ်ဆောင်ဖန်တီးနိုင်ရန် နှင့် မိသားစုတွင်းနွေးထွေး၍ ကျန်းမာမှုရှိစေရန်၊ သမားတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် တန်ဖိုးအား ပြတ်ပြတ်သားသားမြင်လာစေရန်၊ နှင့် ၄င်းတို့၏ဘ၀တွင် မျှတကျန်းမာသည့်သုခများ ဖန်တီးနိုင်မည့် နည်းနာများအား လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်စေရပါမည်။ ဤအရာများအား ဆေးကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် လည်းကောင်း၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြင်ပ စွမ်းဆောင်မှုများ အဖြစ်လည်းကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပေသည်။
ကျောင်းသားများသည် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာနေချိန်တွင် ကောင်းစွာသင်ယူမှုပြုနိုင်ကြသည်။ သူတို့ဆေးပညာသင်ယူနေချိန်တွင် ဘ၀တွင်မျှတကျန်းမာစွာနေထိုင်တတ်ရန် နှင့် ၄င်းတို့၏ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာများအား စောစီးစွာသတိပြုမိကာ ကာကွယ်နည်း ကုသနည်းများ တတ်မြောက်အောင် သင်ယူခဲ့ရမည်ဆိုပါက သူတို့၏ကျောင်းသားဘ၀တလျှောက်လုံးနှင့် ဆေးသမားတော်ဘ၀သို့တိုင် ကျန်းမာသုခနှင့်ရေရှည်ပြည့်စုံစေမည့် အလေ့အထကောင်းများကို ရရှိယူဆောင်လာနိုင်ခဲ့ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
Institute of Medicine of the National Academy မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ထုတ်သည့်Enhancing the Behavioral and Social Science Content of Medical School Curricula စာအုပ်ပါ Physician Well-Being ကိုဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။ Well-Being ဆိုသော်လည်း စိတ်သောကကို ဦးစားပေးရေးထားသဖြင့် သမား၏သောက ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ပါသည်။
Posted by Dr. Yi Yi Win0comments
သမီးတို့ ကလေးလေး ၃-၃-၁၁ မနက်မှာပဲ ပျက်ကျသွားပါတယ်။ ဆရာ့ ပြန်စာတွေနဲ့ အားတင်းထားပေမဲ့ နောက်ဆုံးတော့လည်း ပျက်သွားတယ်။ ဝမ်းနည်းလွန်းလို့ တော်တော်လေးလည်း ငိုခဲ့ရပါတယ်။ အမျိုးသားက ပိုဆိုးတယ်။ သူက ကလေးကို အရမ်း ရူးခဲ့တာလေ။ သမီးတို့ ကလေးပြန်လိုချင်တယ်။ ယူလို့ ရပြီလား ဆိုတာရယ် ကလေးပြန်ယူရင် ပထမကလေးလို မဖြစ်အောင် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ရမလဲ၊ သမီးသားအိမ်က ကလေး ပြန်လွယ်လို့ ရပြီးလား ဆိုတာကို သိချင်လို့ပါ။ သူများတွေ ပြောသလို သားအိမ်-အားဆေးတွေ သောက်ဖို့ လိုလား ဆိုတာကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန် အလိုလိုပျက်တာကို Miscarriage ဆေးစာလုံး သုံးတယ်။ ဖျက်တာကိုကြ Abortion လို့ ခေါ်တတ်တယ်။ World Health Organization ကမ္ဘာ့-ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်က သန္ဓေသားအလေးချိန် 500 grams ထက် နည်းတာ ပျက်ကျမှသာ သားပျက်တယ်လို့ သတ်မှတ်တယ်။ ဒီသတ်မှတ်ချက်က ကိုယ်ဝန် ၂ဝ-၂၂ ပါတ်နဲ့ တူညီတယ်။
ရှိသမျှ ကိုယ်ဝန်ထဲက Miscarriage ဟာ ၁၅-၂ဝ% ရှိတယ်။ အများဆုံးပျက်တာက ၁၃ ပါတ်ကိုယ်ဝန်အရွယ် ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိ ဆီးစစ်တာက ဆီးထဲမှာ hCG levels ခေါ်တဲ့ အချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဟော်မုန်း အခြေအနေကို စစ်တာ ဖြစ်တယ်။ စမ်းသပ်ရတာ သိပ်တိကျတော့ ရာသီလာရမဲ့ရက် မရောက်ခင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဆိုတာ သိလာကြရလို့ ကိုယ်ဝန် ပျက်နှုန်း ၆ဝ-၇ဝ% အထိရှိနေတာ သိလာတယ်။
တချို့မှာ ကိုယ်ဝန်ပျက်တာလို့တောင် မသိလိုက်ကြဘူး။ ၈ ပါတ်နဲ့ ဒိထက်စောတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆိုရင် ဆင်းတဲ့ထဲမှာ သန္ဓေ အစအန Sac (အိတ်) နဲ့ Placenta အချင်းကို ကြည့်မရနိုင်ပါ။ ကျားပိုးနဲ့ မ-မျိုးဥတို့ပေါင်းစပ်ပြီး သန္ဓေ ဖြစ်လာပေမဲ့ ၁၅% ဟာ သားအိမ် အတွင်းနံရံကို လာမတွယ်ဘဲ ပျက်ကျကြတယ်။ ကလေးနှလုံးခုန်တာကို စမ်းရတဲ့နောက် ပျက်နှုန်း ၅% သာ ရှိတယ်။
ဘာလို့ ပျက်ရသလဲဆိုတာ တိတိကျကျ မသိတာများတယ်။ ပဌမ ၃ လအတွင်းပျက်သူတွေမှာ -
1. Chromosomal abnormalities (ခရိုမဇုမ်း) မမှန်တာ၊ အများဆုံးဖြစ်တယ်။
2. Lupus (လူးပတ်စ်) ရောဂါ၊
3. Diabetes ဆီးချိုရောဂါ၊
4. Hormonal problems ဟော်မုန်း ပြဿနာ၊
5. Infection ရောဂါပိုးဝင်တာနဲ့
6. Congenital abnormalities of the uterus မွေးရာပါ သားအိမ် ပုံမှန် မဟုတ်တာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်။
သက်ရှိတိုင်းမှာ Chromosomal (ခရိုမဇုမ်း) မျိုးဗီဇဆိုတာ ရှိကြတယ်။ လူရဲ့ဆံပင်အရောင်၊ မျက်စိအရောင်၊ စတာတွေကို ဆုံးဖြတ်တယ်။ သန္ဓေဖြစ်စကနေ တိုးတက်ဖွံ့ထွားလာဘို့ (ခရိုမဇုမ်း) တွေက အကြိမ်ကြိမ် ကွဲထွက်ကြရတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ် တလျှောက် အမှားဖြစ်စရာ အကြောင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကိုယ်ဝန် ပျက်ဘူးတဲ့ အတွဲတွေမှာ ထပ်ဖြစ်လေ့ ရှိတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ဝန် မယူခင် သွေးစစ်သင့်တယ်။ ပဌမ ၃ လအတွင်း ပျက်ကျတဲ့သန္ဓေသား တဝက်မှာ (ခရိုမဇုမ်း) မမှန်တာတွေ့ ရတယ်။ ဒုတိယ ၃ လမှာ ပျက်ကျရင် ၂ဝ% မှာ အဲလိုတွေ့တယ်။ မိဘတွေဟာ အသက် ကြီးလာလေလေ (ခရိုမဇုမ်း) မမှန်တာ ဖြစ်ဘို့ များလေလေ။ မိခင်လောင်းက ၃၅ နှစ် မကျော်တာ ကောင်းတယ်လို့ ပြောတာ ဒါကြောင့်လဲပါတယ်။
• Collagen vascular diseases ရောဂါတွေဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ရောဂါပြီးသတ္တိ ပျက်လို့ ကိုယ့်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကို ပြန်တိုက်ခိုက်ရာကနေ ဖြစ်ရတာပါ။ Systemic Lupus Erythematosus နဲ့ Antiphospholipid Antibody Syndrome ရောဂါတွေ ပါတယ်။
• Diabetes ဆီးချိုရောဂါကို ထိန်းလို့ ရပါတယ်။ မထိန်းသူတွေမျာ ကိုယ်ဝန်ကို ထိခိုက်နိုင်တယ်။ ကလေးကိုလဲ ထိခိုက်နိုင်တယ်။
• Hormonal factors ဟော်မုန်းကြောင့် ဖြစ်တာတွေထဲမှာ Cushing's Syndrome, Thyroid disease နဲ့ Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) တွေပါတယ်။
• Infections ကူးစက်ရောဂါတွေထဲမှာ Listeria monocytogenes, Toxoplasma gondii, Parvovirus B19, Rubella, Herpes simplex, Cytomegalovirus နဲ့ Lymphocytic choriomeningitis virus တွေပါတယ်။
• Uterine septum မွေးရာပါ သားအိမ်မှာ အကန့်ရှိနေတာ၊ Fibroid tumors သားအိမ် အသားပို အလုံးရှိနေတာတွေကိုလဲ စစ်ရမယ်၊ ကုရမယ်။
• စီးကရက် တနေ့ ၁ဝ လိပ်သောက်သူတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ပျက်နှုန်း ပိုများတယ်။ အရက်၊ ဖျားနေတာ၊ (ကေဖင်း)၊ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေး သောက်တာတွေကလဲ ဖြစ်နှုန်းများစေတယ်။
1. ကိုယ်ဝန်ပျက်မယ်ဆိုရင် ဗိုက်အောက်ပိုင်းကနာပြီး မွေးလမ်းကနေ သွေးဆင်းမယ်။ ဒီအဆင့်ကို Threatened abortion စိတ်မချရတဲ့ ကိုယ်ဝန်လို့ သတ်မှတ်တယ်။ ကောင်းချင်လဲ ကောင်းမယ်။ ပျက်ချင်လဲ ပျက်မယ်။ ၇ ပါတ်နဲ့ ၁၁ ပါတ်အတွင်း အထဲက ကလေးမှာ နှလုံးခုန်တာ သိနေရပြီဆိုသူတွေ သွေးဆင်းတာရှိပေမဲ့ ၉ဝ-၉၆% ဆက်ကောင်းကြတယ်။ Pelvic ultrasound (အာလ်ထွာဆောင်း) နဲ့ စစ်ရမယ်။ Fetal heartbeat နှလုံးခုန်နေတာ ရှိနေသမျှ ကလေးက ကောင်းနေတယ်။ မသေခြာသေးရင် Serial human chorionic gonadotrophin (HCG) သွေးစစ်နေရမယ်။ အလုပ်ရော ယောက်ျားနဲ့ နေတာပါ နားထားရမယ်။
2. Complete abortion ဆိုတာ အလိုအလျှောက် အကုန်လုံး ပျက်ကျထွက်ကျလာတာကို ခေါ်တယ်။ ၁၂ ပါတ် မတိုင်ခင်မှာ ဖြစ်တာ များတယ်။
3. Incomplete abortion ဆိုတာ အလိုအလျှောက် တဝက်တပျက် ပျက်ကျထွက်ကျလာတာကို ခေါ်တယ်။
4. Missed abortion ဆိုတာ သန္ဓေက မရှင်နိုင်ခင်မှာ အထဲမှာတင် ပျက်စီး (သေ) သွားတာ၊ ထွက်လဲကျမလာဘူး။
5. Septic abortion ဆိုတာ ကိုယ်ဝန်လဲပျက်၊ ကိုယ်လဲပူ၊ ချမ်း၊ ကိုက်ခဲနာကျင်၊ ဆင်းတာကလဲ နံနေတယ်။ ပိုးဝင်နေလို့ဖြစ်တယ်။
ဆရာဝန်ရဲ့ အလုပ်ကတော့ ပျက်သွားတာတွေ သားအိမ်ထဲမှာ ကျန်မနေဘို့ဖြစ်တယ်။ Fetus သန္ဓေနဲ့ Placenta အချင်း နှစ်မျိုးလုံး ကုန်ရင်တော့ ထူးလုပ်စရာ မလိုသလောက်ပါ။ မကုန်တဲ့ Incomplete abortion ဖြစ်ရင် Dilation and Curettage (D&C) သားအိမ်ခြစ်တာ လုပ်ပေးရတယ်။ ဆေးနည်းလဲ သုံးပါတယ်။
တခါပျက်ပြီး ရာသီ မှန်တာနဲ့ နောက်ကိုယ်ဝန် ယူလို့ရပါတယ်။ တလ၊ နှစ်လထက် စောင့်စရာမလိုပါ။ တဆက်ထဲလည်း ရတာပါဘဲ။ သွေးဆင်းရပ်ရင် မကောင်းတာ ကျန်မနေနိုင်ပါ။
ကိုယ်ဝန် တခါပျက်တာနဲ့ ဆေးစစ်စရာရှိသမျှ အကုန်လုပ်ဘို့ မလိုတတ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တခါပျက်သူဟာ နောင် ၈ဝ% ကနေ ၉ဝ% ကိုယ်ဝန် အကောင်းရနိုင်လို့ပါ။ ၃ ခါဆက် ပျက်ရင်တော့ ဆေးစစ်တာတွေ လုပ်သင့်တယ်။ မိဘတွေမှာ Chromosomal abnormalities ရှိ-မရှိသိအောင် သွေးစစ်တာကို Karyotyping ခေါ်တယ်။ Hysterosalpingogram (HSG) ရိုက်ရင် သားအိမ် ကောင်း-မကောင်း သိလာမယ်။ Antinuclear antibody, anticardiolipin antibody, VDRL, RPR, and Lupus anticoagulant တွေကိုလဲ စမ်းမယ်။ မကောင်းတာ တွေ့ရင် ကုသပေးရမယ်။
၂၆-၄-၂ဝ၁၁ နေ့အထိ ယမုန်နာဆေးခန်းမှာ ကလေး ၁၈၁ ယောက် မွေးပေးရပြီးပြီ။ အလိုလို တဝက်တပျက် ကိုယ်ဝန်ပျက်လို့ သားအိမ် ခြစ်ပေးရသူ ၃၉ ယောက် ရှိတယ်။
တချို့က ခွဲစိတ်ပြုပြင်ရတယ်။ Progesterone ဟော်မုန်း လိုသူတွေက လိုမယ်။ အခြေခံ အကြောင်းတရား တခုခုမရှိဘဲ အလုပ်ကြောင့်၊ လေ့ကျင့်ခန်းကြောင့်နဲ့ လင်မယားအတူနေလို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်စေဘို့ ပိုမဖြစ်စေနိုင်ပါ။
Medical abortion ကိုယ်ဝန်ကို ဆေးသုံး ဖျက်ခြင်း နဲ့ Abortion Complications ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲများ ကိုလဲ တွဲဖတ်ပါ။
January 4, 2012 2:29 PM
သမီးအသက် ၁၇ ပါရှင့်။ အိမ်ထောင်ကျတာ တစ်နှစ်ရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်ကျပြီးပြီးချင်းပဲ သမီး လက်မောင်းထဲ ထည့်တဲ့ ပစ္စည်း သုံးပါတယ်ရှင့်။ ၁၁ လပိုင်း ၆ ရက်နေ့ ရောက်တော့ အဲဒါကို ပြန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ရှင့်။ ၁၂ လပိုင်းမှာ ရာသီမပေါ်တာ ၄ ရက် ရောက်လာလို့ အိမ်မှာ ဆီးစစ်ကြည့်တော့ Positive ဖြစ်နေပါတယ်ရှင့်။ ၃ ခါလုံး ဒီအဖြေပဲ ထွက်ပါတယ်ရှင့်။ နောက် ၂ ပါတ်လည်း ရောက်ရော သွေးတွေ အရမ်းဆင်းပါတယ်။
ပြီးတော့ လက်ဝါး တစ်ဝက်စာလောက်ရှိတဲ့ သွေးခဲ ရှည်မျောမျောတစ်ခု ပါလာပါတယ်။ သွေးကြော ခရမ်းရောင်အကြောင်းလေးတွေ ပါပါတယ်ရှင့်။ ခါးနည်းနည်းကိုက်တာက လွဲလို့ တခြားဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးရှင့်။ သွေးဆင်းတာကလည်း ခါတိုင်းလိုပဲ တစ်ပါတ်ပဲ ကြာပါတယ်ရှင့်။ အဲဒါ ကိုယ်ဝန်ပျက်တာပါလားရှင့်။ နောက်ထပ်ရော ကိုယ်ဝန် ထပ်ရနိုင်ပါသလားရှင့်။ ဘယ်လောက်ကြာမှ ရနိုင်မလဲရှင့်။ အသက်အရွယ်နဲ့ သားအိမ်ဆိုင်ပါသလားရှင့်။ အခုအရွယ်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ဘာအခက်ခဲတွေ ဖြစ်နိုင်ပါသလဲရှင့်။
ဆီးစစ်လို့ အပေါင်းပြရာကနေ သွေးဆင်းတာဟာ ကိုယ်ဝန်ပျက်တာ သေခြာတယ်။ Complete abortion ကိုယ်ဝန် အပြည့်အစုံ ပျက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် Incomplete abortion တဝက်တပျက် ပျက်တာဖြစ်တယ်။ အဲလိုသာဆို D and C သားအိမ်ခြစ်ရတယ်။ တချို့မှာ Septic abortion ကိုယ်ဝန်ပျက်ရင်း ပိုးဝင်တတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ပြီးနောက် တားတာလဲ မလုပ်ဘဲ အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံရင် ချက်ချင်းဆိုသလို နောက်ကိုယ်ဝန် ဆက်ရနိုင်တယ်။ ဘယ်လောက်ကြာမယ်က တယောက်နဲ့ တယောက် မတူတတ်ပါ။ သီအိုရီအရပြောရရင် ပျက်သွားတဲ့သွေးကို ရာသီလာသလိုဘဲ အောက်မေ့နိုင်ပြီး၊ နောက် ၁၄ ရက်မှာ မျိုးဥထွက်လို့၊ ကျား-သုက်ပိုးနဲ့ ထိတွေ့-ပေါင်းစပ်မယ်ဆိုရင် တခါတည်း နောက်ကိုယ်ဝန် ရလိမ့်မယ်။
အသက် ၁၈ နှစ်အောက်နဲ့ ၃၅ နှစ်အထက်တွေ သားဦး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် အထူးသတိထားရမယ်။ Teenage pregnancy ဆိုတာ ဆယ်ကျော်သက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်လို့ ပြောတာ မမှန်ဘူး။ အသက် ၂ဝ အောက်မှာ ကိုယ်ဝန် ရတာကိုသာ ဆေးပညာက ဆိုတယ်။ (မီဒီယာ) မှာတော့ မိန်းကလေးငယ်ငယ် မရည်ရွယ်ဘဲ၊ ယာက်ျားလဲ မယူဘဲ၊ အမှန်မထင် ကိုယ်ဝန် ရတာကိုမှသာ ဒီဝေါဟာရကို သုံးကြတယ်။
မိန်ကလေးတိုင်း အပျိုဖြစ်တာနဲ့ ၁၂-၁၃ နှစ်ကစပြီး ယောက်ျားနဲ့ ဖေါက်ပြားမိရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ကြတယ်။ မိန်းကလေးငယ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှုန်း နေရာမတူရင် မတူဘူး။ တောင်-ကိုရီးယားမှာ ကိုယ်ဝန် ၁ဝဝဝ မယ် ၃ ယောက်မပြည့်ဘူး။ ဆာဟာရ-အောက်ပိုင်းမှာတော့ ၁၄၃ ယောက်အထိရှိတယ်။ တကမ္ဘာလုံးမှာ ၁၅-၁၉ ယောက်ရှိတယ်။
၂ဝဝ၁ UNICEF စစ်တမ်းအရ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ ၁၂ ထဲက ၁ဝ ခုမှာ အသက်ငယ်ငယ်မှာ လိင်ဆက်ဆံမှုရှိသူပေါင်း ၃ ပုံ ၂ ပုံရှိနေတာ တွေ့ရတယ်။ အမေရိကားနဲ့ ဥရောပါမှာဆို ၈ဝ% ကျော်တယ်။ သြစတြေးလျ၊ ယူကေ၊ အမေရိကားမှာ ၁၅ နှစ်သမီးလေးတွေရဲ့ ၂၅%၊ ၁၇ နှစ်သမီးတွေရဲ့ ၅ဝ% လိင်ဆက်ဆံမှုပြုကြတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ သတိထားကြတာက လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ အတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
Save the Children ရဲ့တွေ့ရှိချက်အရ ကမ္ဘာမှာ အသက် ၂ဝ အောက် မိခင်တွေကနေ မွေးလာတဲ့ကလေးပေါင်း ၁၃ သန်းရှိတယ်။ ၉ဝ% ဟာ မချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေက ဖြစ်တယ်။ မွေးလာကြတဲ့ ကလေးတွေရော သူတို့မိခင်ငယ်လေးတွေမှာရော ကျန်းမာရေး နောက်ဆက်တွဲတွေ ဖြစ်ကြရလို့ သေဆုံးရတာတွေ များတယ်။ အသက် ငယ်ငယ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ပုံမှန် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်းမှာ သတိထားစရာတွေထက် ပိုပြီးသတိထားစရာတွေ ရှိပါတယ်။ အသက်ငယ်လေ ပိုလေဖြစ်တယ်။
သုတေသနတွေလုပ်တော့ Low birth weight ကိုယ်အလေးချိန် မပြည့်တဲ့ ကလေး မွေးတာနဲ့ Premature labor လမစေ့ဘဲ မွေးတာ ဆက်စပ်နေတာ သိရတယ်။ Anemia သွေးအားနည်းရောဂါလဲ ပိုများတယ်။ Prenatal care ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်ခြင်း လုပ်တာ နည်းကြတယ်။ သူတို့ကနေ မွေးတဲ့ကလေးတွေမှာ ဆေးရုံတက်ရတာ ပိုများတယ်။ Inadequate nutrition အာဟာရ မပြည့်စုံတာမှာ မတတ်နိုင်လို့ မစားရသူတွေအပြင် တတ်နိုင်ပေမဲ့ အာဟာရမကောင်းလှတဲ့ Fast food တွေစားလို့လဲ ဖြစ်စေတယ်။ HIV အဖြစ်လဲများတာ သိရတယ်။
Obstructed labour ကလေးကို မွေးလမ်းကနေ ရိုးရိုး မမွေးနိုင်တာလဲပါတယ်။ Caesarean section ခွဲမွေးရတာ ပိုများစေတယ်။ PET/Eclampsia ကိုယ်ဝန်-သွေးဆိပ်တက်တာ၊ Obstetric fistula မွေးလမ်းကြောင်း ပြွန်ပေါက်ဖြစ်တာ၊ Infant mortality မွေးလာတဲ့ ကလေး ၁ နှစ်အတွင်း သေဆုံးရတာ၊ Maternal death ကလေးမီးဖွါးရင်း သေဆုံးရတာတွေ ပိုများတယ်။ Psychosocial စိတ်ပိုင်း သက်ရောက်မှုတွေလဲ ရှိတယ်။
WHO ခန့်မှန်းချက်အရ ၁၅-၁၉ နှစ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူတွေဟာ ၂ဝ-၂၄ နှစ်မိခင်လောင်းတွေထက် Pregnancy related death ကိုယ်ဝန်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး သေဆုံးရနှုန်း ၂ ဆ ပိုတယ်။ ၁ဝ-၁၄ နှစ်သမီးတွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ၂ဝ နှစ်ရှိသူတွေထက် Maternal mortality မီးတွင်းသေဆုံးမှုနှုန်းက ၅ ဆမြင့်တက်တယ်။ Illegal abortion တရားမဝင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်မှုကြောင့် ဖြစ်ရတာတွေလဲ မနည်းဘူး။
မချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ တခြားစဉ်းစားစရာ Social issues လူမှုရေးတွေက များတယ်။ ပညာနည်းတာ၊ ဆင်းရဲတာတွေလဲ ပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ လက်မထပ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရတာက များတယ်။ တတ်နိုင်သူတွေက High-quality medical care အထူး ဂရုစိုက်ကြရင် ပုံမှန် ကိုယ်ဝန်တွေလို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Dr. Tint Swe 10 comments